Nike Run Club yakavandudzwa new dial, "Twilight Mode" uye "Streaks" | Ndinobva mac
Iyo Nike Run Club app inowana kutaridzika nyowani ine nyowani yakasarudzika dial, "Twilight Mode" uye "Streaks"
Kana iwe uchizotenga iyo Apple WatchIwe unenge watoziva kare kuti iwe une iyo Nike yemitambo vhezheni kune ese mamodheru. Chinhu chega chinoshanduka kubva paiyi vhezheni kuenda kune yakasarudzika, ndeye yakasarudzika tambo yemitambo yakasungirirwa kuti iwedzere kufema kana uchidikitira, uye imwe yakasarudzika Nike kufona. Hapasisina mutsauko. Kunaka chete.
Zvakanaka siginecha Nike ichangobva kugadzirisa mashandisiro ayo eApple Watch, uko inosanganisira zvimwe zvinhu zvitsva senge nyowani modular yemitambo nhabvu. Saka kana uine standard Apple Watch, unogona kutenga Nike yemitambo tambo (sezvazviri nyaya yangu), asi haugone kupfeka mitambo yemadhizaini eiyo Joridhani mhando.
Nhabvu yemitambo Nike ichangobva kuzivisa nhevedzano yesoftware inogadziridza yeApple Watch Nike uye nekushandisa Nike Run Kirabhu yeiyo wachi uye iyo iPhone kwairi kwakabatana. Neichi chadzurudzo Apple Watch Nike ikozvino inosanganisira nyowani uye yakasarudzika modular yemitambo wachi yekutarisa.
Yakagadzirirwa kupa akawanda matambudziko, iyo nyowani kumeso inosanganisira inokurumidza kutanga bhatani, akazara emwedzi makiromita uye akatungamirirwa marudzi ane akagadziridzwa zvemukati. Iyi nyowani nyowani inosanganisira Nike Twilight Mamiriro, iyo inopa itsva inomhanya skrini uye dhizaini yakajeka kuti iwedzere kuoneka kana iwe uchiita mitambo husiku.
Paunenge uchishandisa iyo Nike Run Club app yeApple Watch panguva yekumhanya, matsva metrics ikozvino anoita kunge anobatsira kuyera nhanho yemushandisi yega yega. Pamusoro pemakiromita akazara, iyo yakagadziridzwa interface inobvumira vamhanyi kuti vaone yavo yepakati kumhanya uye cadence.
Kukurudzira vashandisi kuti varambe vachidzidziswa, iyo yazvino Nike Run Club interface inopa nyowani «Streaks«. Iyo ficha inopa vashandisi streak bheji kana vakapedza kanenge kamwe mujaho pavhiki. Vhiki rega rega mushandisi anochengeta iyo streak iri mhenyu, uye ivo vanovhura iyo inotevera streak icon pane yakatarisa kumeso.
Iyo Nike Run Club app yekuvandudza yave kuwanikwa kune ese Apple Watches, asi chete vashandisi veiyo Nike vhezheni yeiyo wachi vanogona kushandisa iyo nyowani yakasarudzika bhora yekambani yemitambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Nike Run Club app inowana kutaridzika nyowani ine nyowani yakasarudzika dial, "Twilight Mode" uye "Streaks"
Apple Keynote, Safari 14, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac